Hety mpanety ambongadiny ao an-trano no manapaka ny nify volo manapaka ny nify namboarin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy 2 pcs | Icool
Gunting mpanety trano ao an-trano manapaka ny volon'ny nosy manety ny nify 2mm
Modely ： IC-60G-5; IC-6027TG
Size: 6.0 santimetatra; Nify 27
● Ny tadin'ny hety dia misy volo-volo roa: ny iray manana lelany mahitsy ary ny iray manana lelany manify. Ny hety dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 6CR. Maranitra, mateza ary lafo vidy ny hety. Ity karazana hety ity dia mety ho an'ny vao manomboka manao fanahetanam-bolo, na amin'ny volon-doha ao an-trano. Amin'ity volon-doha ity dia afaka manamboatra volonao sy volo ao an-trano ianao ary mamorona mora ny taovolo tadiavinao. Azonao atao ny mitahiry ny vidin'ny fandehanana any amin'ny trano fivarotana.
● Ny volo fanapahana mahitsy 6.0 santimetatra dia mety amin'ny fanalefahana volo tsara ary hety fidirana ho an'ny taovolo. Voahosotra tsara ny tsipika lohan'ny lohan'ny fanapahana, ary ny tampon'ny hantsana dia manome zoro fanapahana maranitra 45 degre, izay mateza.
● Ny hety 6,0 santimetatra, volo nify 27 dia mpanampy tsara ho an'ny taovolo ao an-trano. Ny tahan'ny manify dia manodidina ny 20-25%. Azo ampiasaina hanamboarana volo sy volo matevina manify. Ny fantsom-panafody dia iray amin'ireo lamaody lamaody ankehitriny, izay mety hahatonga ny olona ho tsara tarehy kokoa noho ny taonany. Raha toa matevina kokoa ny volonao noho ny volonao, dia azonao atao ny manamboatra azy amin'ny hety nify mba hanazavana ny endrika ankapobeny.
● Ny volon'ilay hety dia voakilasy sy voakilasy, ary ny fizotran'ny elektrôlika dia ampiasaina mba hahatonga ny hety ho manan-karena amin'ny endrika, tsy mihena, tsy misy endrika, mahatohitra harafesina ary mamirapiratra
6.0 santimetatra; Nify 27
Teo aloha: 6.0 Napetraka Gunting ho an'ny volo taovolo matihanina
Manaraka: Janpan 440C Gunting mpanety volo Profioanl napetraka